Bokin' i Habakoka - Wikipedia
Bokin' i Habakoka
(tonga teto avy amin'ny Bokin'i Habakoka)
Ny mpaminany Habakoka, nataon'i James Tissot, taona 1836-1902
Ny Bokin' i Habakoka dia boky ao amin'ny Tanakh (Baiboly hebreo) sy ao amin'ny Testamenta Taloha ao amin'ny Baiboly kristiana. Mampita hafatra ny mpaminany fa ny fahoriana dia tsy haharitra: manam-potoana aharetany manokana avy ny zavatra tsirairay, ary ny marina dia tsy maintsy handresy amin’ny farany. "Fa ny marina ho velon’ny finoany" (Hab. 2.4).
3.1 Fahorian'ny marina (1.1 – 2.5)
3.2 Fanozonana ny firenena mpampahory (2.6 – 2.20)
3.3 Salamon'i Habakoka (3.1 – 3.19)
4 Ny akon’ny Bokin’i Habakoka
Tsy misy afa-tsy toko telo ny Bokin’i Habakoka. Ny ankamaroan’ny mpikaroka dia mihevitra fa ny toko voalohany sy faha-2 dia nosoratan’i Habakoka, fa nosoratan’olon-tsy fantatra izay tokony ho niaina taty aoriana kosa ny toko faha-3. Izany fiheverana izany dia tohanan’ny tsy fisiany ao amin’ny horonam-boky atao hoe Hevitenin’i Habakoka hita tao Komràno.
Tsy mora ny mamaritra ny fotoana nanoratana ny boky. Na dia izany aza, ny filazana ny Kaldeana izay asehon’ny boky ho fitaovana nampiasain’Andriamanitra (Hab. 1.6) dia hoatra ny mampiseho fa tamin’ny fotoana nanjakan’izy ireo, tamin’ny taonjato faha-7 tal. J.K., izany hoe taorian’ny taona 626 tal. J.K., izay nandreseny ny Asiriana izany. Mazavazava kokoa anefa ny famaritana ny fotoana nanoratana raha fantarina ireo "mpampahory" sy ireo "olo-marina" voalaza ao amin’ny boky.
Raha ny Asiriana ireo "mpampahory" ireo ary ny Jiosy tao Jodà ireo “olo-marina” ireo, dia tokony ho talohan’ny taona 612 tal. J.K., fotoana nahalavoan’ny Fanjakana asiriana, no nanoratana ny boky. Raha izany no marina, ny toritenin’i Habakoka dia fanambaràna ny haharavan’io fanjakana io, izay firenena lozabe nangeja ny mponin’i Jodà.
Raha ny Kaldeana kosa no lazaina ho io firenena mpampahory io, ireo teny nataon’i Habakoka dia mety hifandray amin’ireo zava-niseho taona maro talohan’ny nahazoan'ny Kaldeana an’i Jerosalema (taona 597 tal. J.K.), na koa fotoana kely torian’izany. Ny maha tsy mazava ny Bokin’i Habakoka dia miteraka fipoirana fivoasana samihafa.
Amin'ny teny hebreo dia atao hoe ספר חֲבַקּוּק / Sefer ‘Khăvhakûk ny Bokin'i Habakoka. Ao amin'ny Septoajinta amin'ny teny grika izy dia atao hoe Ἀμβακούμ Ηʹ / VIII Ambakoúm (ny êta Ηʹ dia manambara ny maha mpaminany madinika laharana fahavalo azy).
Azo zaraina telo ny Bokin’i Habakoka:
Fahorian'ny marina (1.1 – 2.5)[hanova | hanova ny fango]
Miady hevitra amin’Andriamanitra i Habakoka, sahala amin’ny ao amin’ny Bokin'i Jeremia (Jer. 4). I Habakoka dia mitaraina mafy (mitomany) sy manohitra ary manontany ny amin’ny fahoriana ny marina sy ny fahasambaran’ny mpanota. Nilaza Andriamanitra fa eo an-dalam-panandratana firenena iray hafa izay hamabo ny zavatra rehetra. Nefa nanambara koa Andriamanitra fa ny faharesen’io firenena mpampahory io dia ho tanteraka tokoa (Hab. 2.4). Mamarana ny fanambarany ny hoavy Andriamanitra amin’ny filazany fa ho velona noho ny finoany ny marina (Hab. 2.4).
Fanozonana ny firenena mpampahory (2.6 – 2.20)[hanova | hanova ny fango]
Manao teny fanozonana firenena tsy tononiny anarana i Habakoka. Ireo ozona izay miisa dimy ireo dia samy manomboka amin’ny hoe "Lozan'ny …". Io firenena io dia mandroba ny hafa, manorina tanàna amin’ny ran’ny firenena resiny, manetry ireo firenena eo akaininy tsy amin-kenatra, sady miresaka amin-tsampy hazo sy vato izay tsy miteny. Ny Kaldeana (Babiloniana) izay resahina eny aloha (Hab. 1.6) no mety ho io firenena mpampahory resahina eto io.
Salamon'i Habakoka (3.1 – 3.19)[hanova | hanova ny fango]
Ity salamon'i Habakoka ity dia vavaka miendrika tonon-kira manoritsoritra ny hisehoan'ny fandresen'Andriamanitra izay hafaliana sy famonjena ny Voahosony (Hab. 3.13).
Ny akon’ny Bokin’i Habakoka[hanova | hanova ny fango]
Voatsiahy ny hoe "Ny marina ho velona amin’ny finoany" (Hab. 2.4) ao amin’ny Testamenta Vaovao, ao amin’ny Epistily ho an’ny Romana (Rom. 1.17) sy ny Epistily ho an’ny Galatiana (Gal. 3.11) ary ny Epistily ho an’ny Hebreo (Heb. 10.38). Manan-danja eo amin’ny teolojia protestanta izay manandratra avo ny finoana io andalana io.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bokin%27_i_Habakoka&oldid=1012817"
Voaova farany tamin'ny 19 Jolay 2021 amin'ny 10:57 ity pejy ity.